Truecrypt: Waa la waayey iyadoo aan wax badan sharax laga bixin | Laga soo bilaabo Linux
Truecrypt: Waa la waayey iyada oo aan wax badan sharax laga bixin
Dhowr maalmood ka hor, waxaa si qarsoodi ah loo waayey Truecrypt, oo ah softiweerka caanka ah ee loo yaqaan "disk encryption software". Bogooda 'sourceforge' waxay ku yiraahdaan ma ahayn mid amaan ah oo ay ku jiri karto nuglaanta waxayna ku talinayaan in la isticmaalo Bitlocker Drive Encryption, oo ah barnaamijyada wax lagu qoro ee sida caadiga ah ku yimaada Windows Vista, 7 iyo 8. Waxay xitaa xusayaan in horumarka ayaa la joojiyay bishii Maajo, ka dib markii taageerada Windows XP dhammaatay.
Hadda qaar ka mid ah horumariyayaashu waxay go'aansadeen inay been abuuraan koodhka oo ay ku aas aasaan Switzerland, halka Gibson Research Corporation ay leedahay "Maya, Truecrypt wali wuu nabad qabaa", ugu yaraan ilaa Fur Crypto Audit ka soo horjeed dheh. Open Crypto Audit waa mashruuc lagu hubinayo lambarka 'Truecrypt code', bishii Abriilna waxay soo sheegeen in qaybtii ugu horreysay ee baaritaanka la sameeyay iyo 11 nuglaanta ay heleen, ma jirin wax halis ah.
Haddaba maxaa jira?
Sida laga soo xigtay wadaagista Tweets Inta udhaxeysa Steven Barnhart iyo Matthew Green (oo hogaaminaya Open Crypto Audit), Steven wuxuu isku dayay inuu la xiriiro qof ku lug leh wuxuuna ka helay dhowr emayl qof magaciisa la yiraahdo "David."
Muxuu David leeyahay? Dood ahaan ma jirto wax dan ah oo laga qabo in la sii horumariyo Truecrypt. Email kale wuxuu ku sheegayaa in Bitlocker "uu kufiican yahay" iyo in Windows (XP) uu ahaa hadafka asalka ahaa ee mashruuca. Wuxuu sidoo kale leeyahay ma jirin wax xiriir ah oo lala sameeyay dowladda. Steven ayaa weydiiyay haddii uu diyaar u yahay inuu dib ugu shati galiyo lambarka liisamo kale ama fargeeto. David wuxuu ka jawaabayaa in taasi waxyeello yeelan karto maadaama iyaga (kuwa wax dhisa ee Truecrypt) ay aqoon u leeyihiin lambarka.
Sikastaba, taasi waa aragti kaliya sababta ay u baaba'day. Waxaa jira kuwo kale maaddaama ay ku guuleysteen inay jabiyaan sirta, in la yaqaan cidda ay yihiin cidda soo saartay (calaamadda waxaa lagu diiwaan geliyay magaca David Tesarík, malaha waa isla kii soo diray emayllada), in Ilaah jiro oo uu ku jiro dhinaca NSA, iwm
Dhanka kale, isticmaaleyaasha Linux waxaa u yaal dhowr nooc oo kale (oo leh rukhsad yar oo xaddidan marka loo eego runta loo yaqaan 'gaskiya'): dm-crypt, LUKS, eCryptfs, EncFs, RealCrypt (waa wax aan ka badnayn run sheegid sumadeed kale), ZuluCrypt iyo kuwa kale oo badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Truecrypt: Waa la waayey iyada oo aan wax badan sharax laga bixin
Hore ayaan uga shakisanaa. Waqti ka hor ayaan akhriyay runta runta ah, in kasta oo ay yiraahdeen waa il furan, waxay lahayd koodhkeeda asalka ah (aan la aqbali karin), marka lagu daro, way adkayd in la soo ururiyo, sidaa darteed waxay ku siiyeen labalaab ay horay u soo diyaariyeen kooxda runta ah ... waligood ma isticmaalin runta loo yaqaan 'encryption', Amniga kaliya laguma bixiyo sirta, laakiin sidoo kale waxaa lagu bixiyaa barnaamijyada wax lagu qoro ee BILAASHKA AH. Dhab ahaan, ma fahmin sababta dad aad u tiro badan ay u adeegsanayaan runta-encrypt-ka hoosta linux ama windows-ka ... In Linux-ka waxaad ku qarin kartaa disk-ka adag ee LUKS (Linux Unified Key Setup), runti waxaan haystaa disk-ka oo la kaydiyay. Daaqadaha daaqadda macno ma samaynayso in wax la qariyo maxaa yeelay daaqadaha waxaa xukuma nsa ...
Kaalay, layaab igama yaabin. Intaa waxaa sii dheer, waxaan u arkaa mid xiiso leh inay ku talinayaan inay u wareegaan BitLocker, marka ay tahay lahaansho, wax badan oo aan ammaan ahayn, iyo sidoo kale haddii aad tirtirto magacaaga, xitaa haddii aad dib ugu sameyso isla magaca iyo lambarka sirta, tan iyo aqoonsiga isticmaalaha Axdiga Cusub (a registry roll de windows) way ka duwan tahay, dib uma soo ceshan kartid, markii LUKS ay ku qoran tahay eraybixin fudud oo aad ku sawireyso, ku qeexeyso kuna garaaceyso kubbadda.
Taasi waa sababta aan ugu arko inay tahay wax lagu qoslo inay iyagu marmarsiinyo ka dhigtaan inay xal u tahay Windowsers-ka wali isticmaala Windows XP, maxaa yeelay sida loo yaqaan 'Service Pack 3', waxay horey ula timid nidaamka BitLocker oo ay ku jiraan, laakiin kuuma ogolaanin inaad qarin karto darawalada.
Jidka, waxaa sidoo kale lagu samayn karaa yutiilitiyada kale ee GNU / Linux marka laga reebo LUKS.
Haa, waan ogahay in lagu qarin karo barnaamijyo kale oo software ah, in kastoo dabcan, wax walboo sifiican ugu socdaan bartaada. LUKS si aan u kaydiyo darawalkayga adag, iyo gpg + enigmail + thunderbird oo loogu soo diro boostada.
Hadda waxay ku soo muuqataa wakiilkeyga firefox-wakiilka hoosta Ubuntu maxaa yeelay waa waxa aan isticmaalayo, waxaan ku jiraa PC shisheeye.
Waxaan ku haystaa debian fiican laptop-kayga powerpc, oo leh sanduuqa furan ee desktop-ka
Ha walwelin, maxaa yeelay waxaan ku isticmaalayaa Debian + XFCE kitaabkeyga netka, iyo miiskeyga, Debian + KDE.
Waxa aan ku mashquulsan yahay wakiilka isticmaalaha, tan iyo markii aan la shaqeynayo Windows haddii ay kaliya iga tagto wax kale oo aan beddeli karin sida fiidiyowga fiidiyowga ama naqshadeynta garaafka (kombuyuutarkeyga kumbuyuutarka wuxuu leeyahay Windows Vista SP2 iyo netbook-kayga wuxuu leeyahay Windows 8, labaduba waa laba-boot leh Debian).
Waxaan u maleynayaa in microsoft ay bixisay
Ama sida xaqiiqada ah waxay ogaadeen in Windows XP uusan sii wadi doonin dayactir dheeraad ah iyo in kaliya noocyada la duugi karo ay noqon doonaan kuwa kaliya ee hela nooca taageerada.
Wajiyada badan ee magacyadooda la qarinayo ee internetka